Amaphoyisa acacisa ngabafana abashone ngemuva kokudla ama-chips abawacoshile | News24
Amaphoyisa acacisa ngabafana abashone ngemuva kokudla ama-chips abawacoshile
Limpopo – Amaphoyisa aseLimpopo ngoMsombuluko adalule ukuthi babili kuphela abafana abashone ngemuva kwezinsolo zokudla ama-chips abawacoshe emgwaqeni eSekgakgapeng ku-EXT 19, eduzane naseMokopane, ngoMgqibelo.
Ngaphambilini kunabezindaba abebebike ukuthi kushone abafana abathathu.
ULieutenant-Colonel Moatshe Ngoepe uthe kuqinisekiswe ngoMsombuluko ekuseni ukuthi ingane yesithathu, obekubikwe ngeSonto ukuthi ishonile, isaphila.
OLUNYE UDABA:'Ubulale' isoka ngoshevu owaliwe
Kuqinisekiswe ukuthi uTshepo Tlou, usaphila futhi usasesibhedlela, kusho uNgoepe.
"Kuqinisekiswe ukuthi kushone izingane ezimbili kanti ezintathu zona zisasesibhedlela lapho ezilashwa khona. Izingane ezishonile nguMemeza Elisa Mulaudzi, 10, noPaballo Selota, 7," esho.
"Imbangela yokudlula kwalezi zingane emhlabeni ayikaziwa, kodwa uphenyo lwamaphoyisa luzobandakanya ukuhlolwa kwezidumbu," kusho uNgoepe.
Kukholakala ukuthi izingane ezinhlanu zidle okuthile ngaphambi kokuba ziqale zikhale ngezinhlungu, zaze zaphuthunyiswa esibhedlela, esho.
"Izingane ezimbili zishone zifika esibhedlela kanti lezi ezinye ezintathu zona ezineminyake ephakathi kwengu-9 nengu-11 ubudala zisasesibhedlela, ziyelashwa."
UMnyango wezeMpilo esifundazweni usola ushevu ewubize nge-organophosphate, wathi uphenyo luyaqhubeka.
UMnyango ucele abazali ukuba baqinisekise ukuthi izingane zabo azikudli ukudla ezikucoshe emgwaqeni.
"UMnyango uthanda ukudlulisa amazwi enduduzi emndenini elahlekelwe uphinde ufisele abafana abasasesibhedllea ukululama okusheshayo."